Nwoke a zipụrụ ozi ezuru ohi na blog blogger ya. Nke ahụ abụghị amamihe, ebe Blogger na-agbaso ndetu ndetu Digital Millenium Copyright (DMCA). M dejupụtara akwụkwọ Blogger ma nata ọkwa taa na ha ewepụla ọdịnaya ahụ ezuru.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na m na-ama ụma ahapụ ụzọ ntụcha bred na blọgụ m. Ọ na-esiri ndị ohi a ike idegharị ma ọ bụ detuo ọdịnaya ahụ ma mado ya. Kama nke ahụ, ha na-ede algọridim ma jide nri RSS gị ma wepụ ya na blọọgụ ha. Ọtụtụ oge nke a na - eme, blogger amaghị. Abụ m. Otu n'ime ihe mere m ji mepee PostPost ngwa mgbakwunye bụ ka m nwee ike idezi ma tinye ọdịnaya n'ụkwụ m. Ọ bụla post na m RSS ndepụta nwere ụfọdụ ụdị nke njikọ azụ m blog.
Ikekwe otu n'ime ihe ndị kachasị njọ m na-eme bụ na m na-azụta ihe oyiyi site na iStockPhoto maka ozi m niile maka izu na-esote ma ọ bụ karịa. Ebe ọ bụ na m na-akwụ ụgwọ foto ahụ, ọ kwadoro m ka m jiri ya ma ọ nweghị onye ọzọ. Y’oburu n’iburu onye nzuzu izuru ori ihe m, i ghaghi ibiputa onyonyo ndi azutara. Ugbu a, enwere m nnukwu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ịlụ ọgụ ikike nwebisiinka n'akụkụ m. Ozugbo m hụrụ ọkwa bipụtara, ana m akpọtụrụ nkwado site na iStockPhoto ma kọọrọ nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ, ihe oyiyi ahụ, ebe ha si bịa na ezuru ha.
N'ikwu eziokwu, ejighi m n'aka ma ọ bụrụ na iStockPhoto agbasola ikpe ọ bụla… ha niile agbadatala posts ahụ mgbe m chọtara ha wee gwa ha. Enwere m obere obi amamikpe na ya maka m. Achọghị m ịbụ na-ezighị ezi n'akụkụ nke a nwebisiinka uwe na iStockPhoto. Ha nwere akpa miri emi na ọtụtụ ndị ọka iwu.
Anaghị m agbachi nkịtị. M na-eme a Whois.net nyocha iji chọpụta ụlọ ọrụ na-eweta ụlọ ọrụ na onye nwe saịtị ahụ. M ga-agba mbọ kpọtụrụ onye ahụ ozugbo. Mgbe ahụ ozi ịntanetị na-aga ụlọ ọrụ nnabata, tweets na-ewe iwe, na ozi Facebook Wall. Agaghị m akwụsị ruo mgbe m malitere ịzaghachi azaghachi.
Dịka m kwuru na mbụ, agabeghị m gafere ebe a. Enwere ohere mgbe ọ bụla na mmadụ ga-ezu ohi ọdịnaya m ma pụọ ​​n'ọdụ ụgbọ mmiri, zoro ezo, na ọ gaghị ekwe omume ịchụ. Aga m eme ike m niile ịkọwa ha na igwe nyocha na oge ahụ, mana Agaghị m ahapụ ha ka ha laa. Ikwesighi!